COVID19: Laharam-pahamehana ny fanaovam-baksiny sy ny fizaham-pahasalamana ny vehivavy bevohoka | UNICEF Madagasikara
Fitohizan'ireo tolotra ireo mandritra ny valan’aretina COVID-19
01 Septambra 2020
Fitohizan'ireo tolotra ireo ao anatin’ny krizy
Tamin'io andro io dia nandeha an-tongotra tamin’ny làlana mideza any Fianarantsoa (tanànan'ny Faritra Haute Matsiatra, afovoan'i Madagasikara) nandritra ny adiny iray teo ho eo i FANJANIRINA, Marie Luciane, 23 taona, miaraka amin'ny arovava, mba hahatongavany any amin'ny Tobim-Pahasamana Fototra (CSB2) any Anjoma. Ny anton-diany tamin’izany dia mba hanaraka fizaham-pahasalamana mandritra ny fitondrana vohoka ary hahazo ny fatra faharoa amin'ny vaksinin'ny tetanosy.
Satria moa io CSB2 Anjoma io dia eo afovoan-tanànan'i Fianarantsoa no misy azy, noho izany dia anisan’ireo toerana ahitana olona mitsabo tena betsaka indrindra izy io amin'ny fotoana mahazatra. Io tobim-pahasalamana io dia ahitana ireo tolotra fisorohana sy fitsaboana ho an'ny marary mahatratra 26 441 eo ho eo, ka manodidina ny 80% amin'izy ireo dia mipetraka any amin’ny toerana mihoatra ny 5km miala ny afovoan-tanàna.
Io CSB2 io dia nanohy hatrany ireo tolotra voalaza ireo mandritra ity vanim-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana ity satria tobim-pahasalamana mpiandry raharaha hatrany izy ary nanao ny fandaminana rehetra mifandraika amin’ny toe-java-misy.
Nandray ny fepetra ilaina ny mpiasa mba hampihenana ny loza ateraky ny otrik’aretina, toy ireo fitaovana fanasan-tànana eo am-baravarana, ny fandaminana ny toerana izay tokony halehan’ireo marary mba hahafahana mitsirika ireo tranga ahiahiana ho COVID-19 ary ny fanaovana arovava ho an'ny mpiasa sy ny olona rehetra manantona ny CSB2.
Mitantara ny zavatra niainany nandritra ny krizy ara-pahasalamana i Luciane: « Bevohoka aho ary 4km miala ny CSB no misy ahy. Ny fahazaranay dia mandeha fitateram-bahoaka izahay rehefa hamonjy any; kanefa nony tonga tety amin’ny faritra misy anay ny coronavirus dia tsy sahy nandeha fiara fitateram-pahoaka intsony aho satria tsy voahaja mihitsy ilay elanelana 1 metatra. Noho izany dia tsy maintsy miala maraina be any an-trano aho, miaraka amin'ireo vehivavy bevohoka hafa eo amin'ny manodidina ahy, ary mandeha an-tongotra adiny iray eo ho eo mandra-pahatonga any amin’ny CSB. Rehefa tonga ao amin'ny CSB indray dia mbola mila milahatra indray izahay.»
Nandritra ity valan’aretina COVID ity dia nanjary sarotra kokoa ho an'ny mponina ny fahazoana tolotra ara-pahasalamana. Vao mainka sarotra izany ho an’ireo vehivavy bevohoka sy ireo mpitsabo mpikarakara ankizy satria matahotra izy ireo ny hampiasa ny fitateram-bahoaka, ary mila mandeha an-tongotra mandritra ny 45 minitra hatramin’ny iray ora mahery noho izany izy ireo. Aorinan’izay dia mbola milahatra mba hahazoana ny fizaham-pahasalamana izy ireo, ary avy eo indray dia mbola miverina mandeha an-tongotra amin'ilay lalana tamin’ny nandroso.
Toy ny tobim-pahasalamana hafa, nahitana fihenana ny tahan’ny olona manantona ny CSB Anjoma CSB satria matahotra ny ho tratran'ny aretina eny an-dalana ny olona, ary indrindra eny an-toerana.
« Fantatro fa tena misy ny loza mitatao mikasika ny mety hahazoana ilay aretina, ary tsy milamin-tsaina aho momba ny fahasalamako sy ny fahasalaman'ny zanako. Fanampin’izany dia fitondrana vohoka voalohany ho ahy ity, ka noho izany dia tsy maintsy manaraka fizaham-pahasalamana sy manao vaksiny ara-dalàna aho, » hoy ihany i Luciane izay faly tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiny.
Noho ny ezaka nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana tao Anjoma dia afaka nanatanteraka ny fizaham-pasahalamana alohan’ny fiterahana izy.
« Hatramin'ny niatombohan'ny valan'aretina teto amin'ny distrika misy anay dia nandamina ny fotoana fiasanay sy ny isan’ireo mpiasa miandry raharaha izahay. Izany fandaminana izany no nahafahanay mbola mijoro mandrak’ankehitriny. Ankoatr’izany, miahiahy hatrany amin’ny mety hahazoana ilay aretina izahay. Kanefa tsapanay fa tokony hisokatra tsy ankiato ny tobim-pahasalamana amin’izao vanim-potoanan’ny krizy izao satria amin’ny toe-javatra toy izao no mahatonga ny olona hitady fanampiana sy tolotra ara-pahasalamana bebe kokoa. Izahay aza dia nametraka paik’ady ihany koa hahafahana manantona akaiky kokoa ny vahoaka sy manara-maso ny fahasalaman’izy ireo, » araka ny fanazavan’i Fanomezantsoa, mpampivelona ary tompon'andraikitra eo anivon’ny tetik’asa mikasika ny fanaovam-baksiny sy ny fahasalaman'ny reny.
Ny fahasalamana, laharam-pahamehana tsy azo lavina eo amin'ny toe-draharaha maha-olona
Raha toa ka afaka manatontosa ireo asa farafahakeliny mba hampihenana ny loza ateraky ny fihanaky ny otrik’aretina ny sehatra hafa, ny rafitra ara-pahasalamana kosa dia tsy maintsy mampitombo ireo ezaka tanterahiny ho fanampiany bebe kokoa ny mponina mba hiatrehana ity krizy ity. Mbola loza mandindona hatrany ihany koa ireo aretina hafa izay mety hitarika fahafatesana, toy ny tazomoka, ny pesta ary koa ny loza ateraky ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana. Tsy latsak’izany koa anefa ny mety hahazoana tsimok’aretina mikasika ireo aretina azo sorohina amin'ny alalàn’ny vaksiny.
Ireo tobim-pahasalamana fototra rehetra ao amin'ny faritra Haute Matsiatra dia niantoka ny fitohizan'ny tolotra ara-pahasalamana sy vaksiny tena ilaina mandritra ity valan’aretina COVID-19 ity, mba hisorohana bebe kokoa ireo aretina mahazatra. Noho ny fanohanan'ny Gavi Alliance, ireo sampan-draharaha ara-pahasalamana rehetra eo anivon’ny distrika dia nisitraka fifandraisana amin’ny aterineto izay ahafahan'izy ireo manara-maso tsara sy mandrindra ny asa tontosain’izy ireo na eo aza ny toe-java-misy mifandraika amin’ny valan’aretina.
Ary farany, ny distrikan'i Fianarantsoa dia iray amin'ireo distrika 49 izay nahitana fanamafisana ny tolotra momba ny vaksiny, ny fizaham-pahasalamana aloha sy aorian’ny fiterahana, ny fiterahana eny anivon’ny CSB ary ny fizarana vitamina A, nanomboka tamin'ny volana jona 2020 ka hatramin'ny janoary 2021. Misy ireo paik’ady manakaiky ny mponina eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina izay hotanterahina mandritra ny enim-bolana. Ny tanjona amin’izany dia mba hahafahana mikendry tsara kokoa ny mponina eny an-toerana, indrindra any amin'ny faritra saro-dàlana, ary mba hanatsarana ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fandrindrana ny hetsika fanentanana miaraka amin'ireo manampahefana eny an-toerana, mpitarika nentim-paharazana ary ara-pinoana.
Ireo marary ao amin'ny CSB2 Anjoma miandry ny fizaham-pahasalamana alohan’ny fiterahana (CPN) sy aorian’ny fiterahana (CPoN)
Fisafoana mialohan'ny fahaterahana
Fikarakarana eo am-piterahana
Ny fahazoan'ny mponina tolotra momba ny fahasalamana
Ny fanohanan'ny UNICEF dia anisany manamafy ny fanomezana amin'ny andavanandro ireo tolotra fanome rehefa Herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza
Mpivady mifanohana ho an’ny fahasalaman’ny zanany
Lehilahy iray niavaka, raim-pianakaviana tokana niaraka niandry teo amin'ny dabilion'ny tobim-pahasalamana mitondra ny zanany atao fizaham-pahasalamana
Nitombo 50% ny tahan’ny fahafatesana vokatry ny kitrotro manerantany teo anelanelan'ny 2016 sy 2019, ary nahatratra 207 500 tamin'ny 2019